NISA oo gacanta ku soo dhigtay Xubin ka tirsan Al-Shabaab. – Hornafrik Media Network
NISA oo gacanta ku soo dhigtay Xubin ka tirsan Al-Shabaab.
By Liibaan Nuur	 On Apr 25, 2019
Muqdisho-Hornafrik-War ka soo baxay Hay’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in howlgal la sameeyay deegaanka Ceelasha biya lagu soo qabtay xubin ka tirsan Al-Shabaab.
Qoraal la soo dhigay Barta twitter-ka Hayd’adda NISA ayaa waxaa lagu sheegay in howlgal xirfadeysan oo aan cidi wax ku noqon lagu qabtay xubin ka tirsan Al-Shabaab oo maleegayay qaraxyo sida hadalka loo dhigay.
Taliska NISA ma shaacin Magaca Shaqsiga ay sheegtay inay qabatay.
Taliska Nabad Sugida Soomaaliya ee NISA ayaa bilihii la soo dhaafay waxaa ay shaacineysay in howlgallo ay sameeyeen ay ku qabteen xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish oo dagaal kula jira Dowladda Soomaaliya.
Howlgal aan cidi wax ku noqon oo ciidanka amnigu ka fuliyay Ceelasha Biyaha ayaa waxaa lagu soo qabtay howlwadeen Amniyaatka Alshabaab ka tirsan. Saraakiisha amniga ayaa ku haya baaritaan la xariira howlaha gurracan ee uu ku jiray.
— NISA (@HSNQ_NISA) April 25, 2019
Bambo Gacmeed xalay lagu weeraray Madaxtooyada Koofur Galbeed ee Baydhabo.
Sheekh Shariif oo maanta soo gaaray Muqdisho.